Ipolisi Yemeko Ongenakuyinceda iyasebenza kukubhukisha kwam ngexesha lobhubhane weCOVID-19? – inqaku loncedo
Qaphela: Ukususela nge-31 kaMeyi 2022, iimeko ezinento yokwenza nobhubhane weCOVID-19 azisaqukwanga kwipolisi yethu yemeko ongenakuyinceda. Xa ukubhukisha kwenziwe ngaphambi kwe-31 kaMeyi 2022, naxa kubhukishe umhlali eMzantsi Korea nakwimimandla yaseTshayina, iimeko ezithile ezinento yokwenza neCOVID-19 ziza kuqhubeka ziqukiwe.
Eli nqaku liyichaza ngokweenkcukacha indlela iPolisi Yemeko Ongenakuyinceda esebenza ngayo xa kurhoxiswa ngenxa yeCOVID-19.
Nalu ushwankathelo olunokukunceda ubone ukuba ukubhukisha kwakho kuyafaneleka na.
Ukuba ubhukishe nge-14 kaMatshi 2020 okanye ngaphambi koko, ukubhukisha kwakho kuyafaneleka ukuba zonke ezi zinto zilandelayo ziyinyani
Usuku lokubhalisa xa kufikwa lukwiintsuku eziyi-45 ezizayo ukususela namhlanje
kwaye awukabhalisi xa ufika
kwaye ubhubhane uyakuthintela ekugqibezeleni ukubhukisha kwakho
Ukuba ubhukishe emva kwe-14 kaMatshi 2020 nangaphambi kwe-31 kaMeyi 2022, ukubhukisha kwakho kuyafaneleka ukuba zonke ezi zinto zilandelayo ziyinyani
Usuku lwakho lokubhalisa xa kufikwa lukwiintsuku eziyi-14 ezizayo
kwaye wena okanye olunye undwendwe ohamba nalo ngoku lugula yiCOVID-19
Ukuba zonke ezo zinto ziyinyani, ungarhoxisa ngokuqhakamshelana neqela lethu lokunceda intsapho. Siza kukucela ukuba uqinisekise le nto ngamaxwebhu (njengeziphumo zokuhlolelwa iCOVID-19), ukuba umthetho uyavuma. Iakhawunti yakho iza kuvalwa okwexeshana ukuba wenze ukubhukisha okutsha, ibe nakuphi na ukubhukisha okuzayo kwiintsuku eziyi-14 ezizayo kuza kurhoxiswa.
Ukuba awufaneleki uze urhoxe, imali oza kuyibuyiselwa iza kuxhomekeka kwipolisi yokurhoxa Yombuki Zindwendwe wakho ibe siza kukubonisa imali oza kuyibuyiselwa ngaphambi kokuba uqinisekise ukurhoxa. Kule meko, imali emele ibhatalwe Umbuki Zindwendwe nemali emele ibuyiselwe kundwendwe ikhutshwa ngokwepolisi yokurhoxa Yombuki Zindwendwe obuyamkele ngokuya ububhukisha.
Qaphela: Xa ukubhukisha kurhoxiswa, uAirbnb unika Umbuki Zindwendwe nayiphi na imali amele ayibhatalwe aze abuyisele undwendwe imali olumele luyibuyiselwe ngokwepolisi yokurhoxa Yombuki Zindwendwe. Ngenxa yeso sizathu, ukubhukisha okurhoxiswe ngaphambi kokuba kwaziswe okanye kwandiswe ukuqukwa kwiimeko ongenakuzinceda akuzukuphinda kuhlolwe.
Ukuba ubhukishe nge-31 kaMeyi 2022 okanye emva koko, ukubhukisha kwakho akufaneleki*, kodwa ungakhetha kwezi zinto zingakumbi zilandelayo
Ukuba uhambo lwakho lunokutshintshwa, ungacinga nangokusebenzisana Nombuki Zindwendwe wakho ukuze utshintshe ukubhukisha kube ngelinye ixesha.
Ungaqhakamshelana Nombuki Zindwendwe wakho uze ucele ukubuyiselwa imali eyongezelelekileyo, kwaye ukuba uyavuma, angasebenzisa Iziko Lezemali ukuze akuthumelele imali ngendlela ekhuselekileyo.
Ukuba sele ukurhoxisile ukubhukisha kwakho okanye sele ubhalisile xa ufika, ungaqhakamshelana neqela lethu lokunceda intsapho ukuze ufumane uncedo.
*Ukubhukisha kwabahlali eMzantsi Korea kuza kuqhubeka kukhuselwa ukuba wena okanye olunye undwendwe ohamba nalo lugula yiCOVID-19. Kusebenza iipolisi ezahlukileyo xa kubhukisha abahlali kwimimandla yaseTshayina kunye nokubhukisha kweLuxe.
Ukutshintsha ukubhukisha kwendawo yokuhlala
Thumela isicelo sokutshintsha kuMbuki Zindwendwe wakho ukuba ungathanda ukutshintsha ukubhukisha kwakho.